Iindaba-Khetha umatshini wemaski kuya kufuneka wazi la manqaku alandelayo
Kule mihla, abantu abaninzi nangakumbi babona intengiso yeemaski zokuzikhusela, kunye nokubona imeko yophuhliso lwexesha elizayo. Intengiso inkulu kakhulu. Ngakumbi nangakumbi abantu bakhetha ukuthenga izixhobo zoomatshini ukuze babe ngabenzi bemaski. Ngaba unawo la mathuba alandelayo onokuthi uwaqwalasele xa ukhetha iimaski?
1. Kule mihla, oosomashishini kunye nabahlobo abathanda ishishini bonke bakhetha ukuba ngabenzi bemaski njengokunyanzeliswa komthetho. Kutheni sisitsho nje? Oku kubangelwa kukungcoliseka kwendalo. Ngoku, uninzi lwabantu lunxiba iimaski xa luphuma. Abanye abantu abadumileyo baxela ukuba imboni yeemaski iya kuba yinto ethandwayo ngakumbi. Ukusuka kwezi zinto zingentla, ikwabeka isiseko esihle soshishino lwemaski lwexesha elizayo Ukuze kwandiswe imveliso yeemaski kunye nokuhlangabezana neemfuno zentengiso, abavelisi bemaski bamkele oomatshini beemaski ezahlukeneyo kunye nezixhobo zokujoyina imveliso.
2. Ukusetyenziswa koomatshini bokuvelisa kunye nezixhobo akunakusindisa abasebenzi kuphela, konga ixesha lokuvelisa kunye nokusetyenziswa kwezinto, kodwa kuqinisekisa imveliso efanelekileyo, ukuqinisekisa umgangatho weemveliso njalo njalo. Izisa imeko eyahlukileyo kwimveliso yesandla kwimveliso yeshishini labo, ke yinkqubela phambili enkulu kubenzi bemaski. Nangona ukuveliswa kweemaski kunokubona ukukhula okukhawulezileyo kunye nophuhliso lwamashishini ngezi zixhobo, kodwa ngamashishini amaninzi nangakumbi ajoyina umzi mveliso wezixhobo zoomatshini, ukuba abavelisi beemaski bafuna ukuphumelela, kufuneka baphucule ukhuphiswano lwamashishini ngokukhetha eyona ilungileyo.
3. Naliphi na ishishini elinokuqhuba ikomkhulu linyanzelekile ukuba lilinganiselwe, kwaye nangona ukusetyenziswa kwezixhobo zemaski kunokuba yimveliso esemagqabini, kodwa ukusetyenziswa kwezixhobo kunye nemveliso yoomatshini kulinganiselwe. Xa ishishini likhula ngokuba likhulu kwaye likhulu, kuphela zixhobo ezimbalwa ezingonelanga. Ukwandisa utyalomali kwizixhobo zoomatshini bokuzifihla kunokudala inzuzo engaphezulu, kwaye ukuthenga izixhobo ezininzi ngemali encinci kuzisa into engenziwanga nto, eluncedo olukhulu kuphuhliso lwamashishini.
Ngoku, ibango elishushu lomzi mveliso wemaski kukuba imali yoosomashishini inomda. Ukuze babuyisele ngokukhawuleza iindleko kwaye bazise inzuzo ngakumbi kubo, baya kukhetha ukuthenga imveliso yezixhobo. Ukubekwa ngesandla kungagcina imali eninzi, kwaye ukusebenza kwayo kuphezulu kakhulu. Uphuhliso olukhawulezileyo lulungele ukuqala kwangoko, kwaye abavelisi beemaski ezinkulu baya kuthenga oomatshini abaninzi Ukunyusa isabelo sentengiso, ukuzisa inzuzo ephezulu kunye nophuhliso olungcono kumashishini.
umatshini wokwenza imaski engalukanga, oomatshini ubuso ukwenza imaski, ithumbu nokubotshwa umatshini, non elukiweyo ubuso imaski ukwenza umatshini, umatshini wobuso bomaski, umatshini wokwenza imaski,